Cristiano Ronaldo Oo Jabiyey Sharciga Xakamaynta Korona Fayraska, Wasiirka Ciyaaraha Talyaaniga Oo Ka Hadlay Iyo Doodda Juventus - Gool24.Net
Cristiano Ronaldo Oo Jabiyey Sharciga Xakamaynta Korona Fayraska, Wasiirka Ciyaaraha Talyaaniga Oo Ka Hadlay Iyo Doodda Juventus
Wasiirka Isboortiga waddanka Talyaaniga, Vincenzo Spadafora ayaa shaaciyey in aanu ogeyn cidda siisay Cristiano Ronaldo ogolaanshaha uu dib ugu soo laabtay waddanka Talyaaniga isaga oo qaba xanuunka Korona Fayras oo ku dhacay xilli uu ku sugnaa Portugal.
Cristiano Ronaldo ayaa waajahaya kiis dacwadeed oo la xidhiidha inuu yimid Talyaaniga iyadoo cid waliba ogtahay inuu xanuunka Korona Fayras ku dhacay, isla markaana aan ogolaansho ka haysanin dawaldda dalkaas, sida uu sheegay Vincenzo Spadafora oo ah wasiirka ciyaaraha Talyaaniga.
Xiddiga reer Portugal ayaa Portugal u ciyaaray labadii kulan ee France iyo Spain, laakiin waxa uu seegay ciyaartii Sweden ee habeen Khamiistii kaddib markii laga helay xanuunka oo mar kale si weyn ugu faafaya Yurub.
Ronaldo ayaa Arbacadii ku laabtay Talyaaniga isagoo loo kireeyey diyaarad khaas ah oo sida baabuurta degdegga ah ee loogu talo-galay adeegyada caafimaad loo qalabeeyey, laakiin taasi kama hor joogsanin in lagu eedeeyo inuu jabiyey sharciga xakamaynta xanuunka.
Vincenzo Spadafora oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanay ogolaansho siinin Ronaldo uu ugu soo laaban karo Talyaaniga isagoo xanuunkan qaba, waxaana uu yidhi: “La’aanta ogolaanshaha masuuliyiinta caafimaadka, waxay ila tahay inuu jabiyey nidaamka xakamaynta xanuunka.”
Laakiin Juventus oo war-saxaafadeed kaga jawaabtay ayaa tidhi: “Cristiano Ronaldo waxa uu waddanka Talyaaniga ugu soo laabtay duulimaad caafimaad oo ay ogolaanshihiisa bixiyeen masuuliyiinta caafimaadku, kaddib markii uu ciyaartoygu sidaa ka codsaday, waxaanu karantiilka kusii wadi doonaa gurigiisa.”
Cristiano Ronaldo ayaa ka maqnaan doona labada ciyaarood ee horyaalka Serie A ay Juventus la ciyaari doonto Crotone iyo Verona, sidoo kalena waxa uu seegi doonaa ciyaarta Champions League ee Dynamo Kiev.
Waxa kale oo ay Juventus cabsi ka qabtaa haddii uu xiddigeedani ciyaari doona kulanka Barcelona ay ku ballansan yihiin October 28 oo ay isku group yihiin tartanka Champions League.